Ninka adduunka ugu dheer iyo naagta ugu gaaban oo Qaahira ku kulmay: Sawirro – Warfaafiye:
Ninka adduunka ugu dheer iyo naagta ugu gaaban oo Qaahira ku kulmay: Sawirro
Ali Mohyadin Jan 30, 2018 0
Kulan indhaha caalamka, gaar ahaan dalxiisayaasha soo jiitay ayaa ka dhacay magaalada Qaahira ee dalka Masar, kadib markii ay kulmeen ninka adduunka ugu dheer Sultan Koset oo 34-jir iyo Jyoti Amge (24-jir).
Labadan ruux oo dherer ahaan aad u kala fog ayaa islamarkiiba isla jaan-qaaday, dhererkuna ma noqon mid hakiya amaba isfahamka labadooda.
Jyoti Amge oo kasoo jeeda dalka Hindiya ayaa dhererkeedu yahay 60 centimitir oo keliya, halka Sultan uu dhulka u jiro 2,46 mitir. Amge iyo Sultan ayaa waxaa kulankan u qal-qaaliyay oo Masar ku kulansiiyay hay`adda dalxiiska dalka Masar, waxaana ay uga gol-leedahay sidii ay dalxiisayaal badan ugu soo jiidi laheyd dalka Masar, gaar ahaan gobta dalxiisa ee pyramids.
Sultan oo isna kasoo jeeda dalka Turkiga ayaa sannadkii 2013-ka waxa uu sheegay in uu ku dhigan yahay helidda lammaane, balse nasiib darro waxa uu dhowaan helay oo uu guursaday gabar Suuriyaan ah taas oo ka heshay laguna magacaabo Merve Dibo. “Waan cunaa oo waan cabaa, waana riyoodaa sida dadka kale, waxaana ku riyoodaa in aan mar uun noqday jilaayad wax ka dhigta aflaat Bollywoodka”, sidaa waxaa tiri gabadha gaaban ee Agme oo hammigeeda ka hadlaysay.